Basikety – «Amboaran’ny filoha» : hiatrika ny “play off” ny BCA sy ny BCTT | NewsMada
Basikety – «Amboaran’ny filoha» : hiatrika ny “play off” ny BCA sy ny BCTT
Par Taratra sur 20/02/2017
Tafita ary hiatrika ny “play off” ny BCA Andohan’Ilakaka sy ny BCTT Atsimo Andrefana, eo amin’ny fiadiana ny “amboaran’ny filoha”, taranja basikety ho an’ny faritra atsimo. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja mitafon’i Toliara. Ireo ekipa ireo mantsy no niatrika ny famaranana, ho an’ity faritra ity. Hisolotena ny faritra atsimo izany ireo ekipa roa tonta ireo.
Raha hiverenana kosa ny nahatafita azy ireo dia resin’ny BCA tamin’ny isa 67 no ho 50 ny Vahontsoy Androy, teo amin’ny lalao manasa-dalana voalohany ary ny CBBCR avy any Atsimo Andrefana kosa no lavon’ny BCA Ihorombe, tamin’ny isa 69 no ho 42, nandritra ny ankatoky ny famaranana faharoa.
Marihina fa ny 18 ka hatramin’ny 26 marsa ho avy izao ny hanaovana ny “play off”. Hitohy amin’ny fifanintsanana ho an’ny faritra andrefana indray ny fifanintsanana ho an’ity fiadiana ny “amboaran’ny filoha” ity. Tsiahivina fa manohana ity fifaninanana ity hatrany ny orinasan-tserasera Telma.